Daawo vedio” dacwadda ka dhanka ah Eedeysane C/risaaq Calool geel oo soo idlaatay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Daawo vedio” dacwadda ka dhanka ah Eedeysane C/risaaq Calool geel oo soo...
Daawo vedio” dacwadda ka dhanka ah Eedeysane C/risaaq Calool geel oo soo idlaatay
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhan ah eedeysane Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo racfaan ka soo qaatay xukuno horay ugu riday Maxkamadda,waana markii saddexaad oo dacwadan la dhageysto.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa weydiiyay xafiiska xeer ilaalinta ee Ciidamada iney keenaan Maxkamada horteeda marqaatiyaasha ku xusan eedeysanaha Kiiskiisa oo markii saddexaad loo fariistay.
Ma jirin wax marqaati ah oo la horkeenay Maxkamadda,balse badalkeeda xafiiska ayaa soo jeediyay ineysan sii socon karin xilligan ka dib dacwad qaadista eedeysanahan,waxaa kale oo ay soo jeediyeen in Maxkamada go’aan ka gaarto eedeysanaha iyadoo la raacinayo tallaabooyin amni oo xadidaya dhaq dhaqaaq eedeysanaha.
Guddoomiyaha Maxkamadda ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa soo xiray fadhiga Maxkamada,wuxuuna u sheegay dhammaan ka qeyb galayaasha in Maxkamada go’aan ay ka soo saari doonto Kiiska.
“ Kiiska sidaasi ayuu ku gabagabeysan yahay,wixii go’aan ah Maxkamadda dib ayay ka soo sheegi doontaa,” ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamada sare ee Ciidamada Qalabka sida.
Eedeysane Cabdirisaaq Xuseen Tahliil ayaa xilliyo kala duwan loo xiray arrimo la xiriira argagixisanimo,waxayna Maxkamadaha ciidamada Puntland xilliyo kala duwan ku xukumeen dil iyo xabsi,balse Bishii November 2018, ayaa Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Heer Federaal looga fursan waayay Kiiskan oo culeyskiia lahaa oo ay la soo wareegtay.
Previous articleDEG DEG” Madaxweynihi hore ee Itoobiya oo geeriyooday
Next articleDaawo vedio” Sheekh Shariif oo kashifay ballan uu ka baxay Madaxweyne Farmajo. “Qofkii la doorto Jinni ayaa ku dhaca.!”
Maxay tahay sababta looga gaabsado dilalka khaarijinta ah ee ay fuliso Kuuriyada Waqooyi?
War Hadda Soo Dhacay: Qarax Ka Dhacay Muqdisho+faah faahin laga helaayo
Maxay ka wada hadleen Wasiirka arrimaha dibeda Somalia & dhigiisa Wang Yi (Daawo Sawirro)
“Is-ballaarinta Daacish ee Muqdisho, hal arrin ayaa hor-taagan [Mana aha DF]”
SAWIRRO: Lamaane Udhashay Dalka Canada Oo Arooskoodu Kadhacay Hargaysa
DFS oo sharaxaad ka bixisay shaqo joojin ay ku sameysay labada hay’adood
Soomaaliya oo Itoobiya kala hadashay caqabadaha heysta Ardeyda+Ujeedka Wasiir Godax Barre ee itoobiya
Sawirro:Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo booqasho lama filaan ku tagay Abu Dhabi, maalin kaddib booqashadii Doxa
DAAWO MUCJISO: Dhacdo Xanuun Badan Aabe Xaaskiisii Xoog Looga Watay & Masuuliyiin ka…